Ngaphakathi Isikhathi Sonyaka 4 se- "Veronica Mars" (i-Article 1 ye2) - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - NAB Show LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » Ngaphakathi Isikhathi sonyaka 4 se "Veronica Mars" (i-Article 1 ye2)
Ngaphakathi Isikhathi sonyaka 4 se "Veronica Mars" (i-Article 1 ye2)
Veronica Mars Umqondisi uScott Winant kusethi (© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. Wonke Amalungelo Agodliwe.)
Akukaze kube nesikhathi esijabulisayo kakhulu sokuxhuma ubuchwepheshe bethelevishini enkulu kunamanje. Futhi isizini entsha ye Veronica Mars, ebikhokhelwa ngenyanga edlule kwaHulu, yi-Exhibit A yokuthi kungani kunjalo. Lolu chungechunge seludlule kude selokhu lwaqala njengoshintsho lwe-noir ku-Nancy Drew, lapho umphenyi wayo ukuxazulula izimfihlakalo esikoleni esiphakeme nasekolishi. Uchungechunge 'lwesine lwamanje lwefilimu yasendulo iyinto emnyama kakhulu futhi enamandla amakhulu, ngohlobo lwenhlolokhono, inkhulumomphendvulwano eqondakalayo eyodwa ehambisana nomqambi wombukiso, umakhi-umlobi uRob Thomas. Uma ungakaze uyibone iNkathi 4 okwamanje, ngincomela ukuyibuka njenge-ASAP. Futhi gwema ukufunda noma yini ngesizini engacacisi ukuthi ayonakalisi. (Okwerekhodi, le ndatshana ayiqukethe abaphangi abaphambili.)
Ukusho ukuthi iNkathi 4 iguqula umdlalo, yize kunjalo, kubo bobabili abalingiswa futhi uchungechunge uqobo alubalwa ngokuthi “umchithi” ngoba uVeronica (Kristen Bell), emlandweni wakhe we-voiceover ekuqaleni kwesiqephu sokuqala, uxwayisa ababukeli ukuthi akuyona yonke into ezophela kahle ngesikhathi imfihlakalo yamanje ixazululwa. Leyo mfihlakalo ihlanganisa uchungechunge lokuqhuma kwamabhomu edolobheni laseNeptune, CA (ukulungiswa kwenganekwane) ngesikhathi sekhefu lonyaka lasentwasahlobo. Ukuqhuma kwamabhomu okuqala, endaweni ebiza kakhulu isabelomali, kuqala izinsolo zokusolwa, iziphambano eziphindwe kabili, izimo zokuziphindisela, kanye nokumangalelwa kwecala, abanye bekufanele, hhayi iningi. (Njengesikhathi eside Veronica Mars abalandeli, aziwa kakhulu ngokuthi “ama-marshmallows,” sebevele bayazi, iNeptune “idolobha elingenasigaba esiphakathi,” futhi ukungqubuzana kwekilasi phakathi kokubanakho nokungabinakho konke, obekulokhu kugcwele ngaphansi kobuso, kusongela ukubilisa engcupheni yokuvuka kwamabhomu.)
Isizini futhi isebenza ukuvuselela abalandeli ezimpilweni zamanje zabalingisi abazithandayo. UVeronica, maphakathi ne-30s yakhe, ubambisene nobaba wakhe uKeith (Enrico Colantoni) enhlanganweni yakhe yabaseshi yangasese, into enhle ngoKeith, manje ohamba nomhlanga, ngoba uyaqhubeka nokuba nezinkinga zezempilo ngenxa ingozi yemoto ayithola ku-2014 Veronica Mars imuvi. UVeronica nesoka lakhe lesikhathi eside engekho futhi u-Logan Echolls (Jason Dohring) bahlanganyela efulethini lolwandle lapho engekho phesheya esikhundleni sakhe njengo-Naval Intelligence Officer. Ezinye izintandokazi, ezifana nomngani omkhulu kaLogan, umfana ocebile wezinyanya nomndeni wephathi uDick Casablancas (Ryan Hansen); Umngani kaVeronica osondelene noWallace Fennell (uPercy Daggs III), umholi weqembu lezigelekeqe u-Eli “Weevil” Navarro (Francis Capra); kanye nommeli osezingeni eliphansi, owavikela umphakathi, kanye nekhasimende lesikhashana sokuphenya iMars, uCliff McCormick (Daran Norris), bonke bavele ngokubonakala.
Ukuzijoyina ezinye zezinkanyezi zezivakashi zokuqala, kufaka phakathi uPatton Oswald njengomfana oseleminyaka yobudala wokulethwa kwephoyinti nozungu uPor Epner; UJK Simmons njengo-ex-con Clyde Pickett, osebenza njengomphathi wegagasi likaDick's boyazy estateate omkhulu, “Big Dick” Casablancas (David Starzyk); noKirby Howell-Baptiste njengoNicole Malloy, ongumnikazi we- “Comrade Quacks,” umgodi owuthandayo wokwephuka kwentwasahlobo.
Umqondisi womkhiqizi we-Emmy owathola umklomelo amahlandla amabili uScott Winant, mhlawumbe ushaye owaziwa ngochungechunge oluhlanjalazwa njenge amashumi amathathu, Impilo Yami Ebizwayo, Ukuphuka Okubi, Blood weqiniso, Futhi Californication, okusha UVeronica Mars, kepha wayephathiswe iziqephu ezimbili zeSizini 4, “Ukulahlekelwa NguSreak” kanye nesizini ethi “Iminyaka, Amazwe Amazwe, Ukuchitha Igazi.” Kodwa-ke, wazithola ezinye izindaba ezifana naleso sabelo sakhe sangaphambilini.
“Akunjalo Ukuphuka Okubi, kube nokulingana okubucayi phakathi kokuhlekisa, idrama nezenzo zobudlova ezingazelelwe, ”kusho uWinant. “UKristen Bell unekhono elingajwayelekile lokuthola ithoni efanelekile ekusebenzeni kwakhe ukuze yonke le mibala ehlukene ihlangane. Ngithathe ukuhola kwami ​​kuye lapho ngiqondisa abanye abadlali ukwenza isiqiniseko sokuthi iziqephu zizizwa zilungile ngokweqile. Futhi, lo mbukiso unesigqi esijwayelekile kokubili kungxoxo yayo ehlakaniphile ehlakaniphile futhi endabeni yayo eyindida. Ngisebenze kanzima ukudala isitayela sokubuka esisekela lezo zinto. Ngikujabulele ukufunda ngomlando womdlali ngamunye kulo mbukiso nokuthi abalingiswa babo bayithinte kanjani iVeronica. Njengomuntu omusha, inhloso yami bekuwukuhlonipha okwedlule, kodwa futhi nokuletha umbono wokuthi nginethemba lokuthi kuzonikeza ababukeli bokuqala indlela ekhululekile ochungechungeni. ”
Njengoba angicacisela, uWinant wayengeke ajabule kakhulu ukusebenza ne Veronica Mars cast and crew. Wachaza: “Okokuqala, uKristen uyisimangaliso. “Akusikhona noyedwa kuphela wabalingisi abaneziphiwo engake ngasebenza nabo kodwa umuntu omkhulu oqotho. Kusethiwe, ugxile ngokuphelele futhi ukhiye ngaphakathi, hhayi kuphela emsebenzini wakhe, kodwa nakwezinye izinto eziyikhulu ezizungezayo. Ngikusho kaningi ngenkathi ngidubula ukuthi ukuba noKristen Bell endaweni yesehlakalo kufana nokuthi kube nomqondisi-osebenzayo. Unobuhlakani obumangalisayo futhi uyawazi umsebenzi wawo wonke umuntu. Akunandaba ukuthi ihlombe lidonsa kanzima kangakanani, uyakwazi ukuzivumelanisa ngaso leso sikhathi futhi enze nezikhathi ezinzima kakhulu zibe lula. Futhi uRicco [Colantoni] uyisikhulu. Naye, ungumlingisi omuhle kakhulu, kepha njengoKristen, ungumuntu omuhle kakhulu, onomusa ophanayo. Phansi komugqa, ngaphesheya kwebhodi, i-cast yonke bekujabulisa ukusebenza nayo. Abasebenzi babezizwa njengomndeni futhi bangenza ngazizwa ngamukelekile. Yonke iminyango ikhombise intshiseko nomdlandla kuyo yonke imibono yami futhi yanginika amathuluzi engangiwafuna ukwenza okuthile okukhethekile kulo mbukiso oyingqayizivele. ”
Kuyisibonakaliso kwekhono likaWinant njengomqondisi ukuthi iziqephu zakhe ezimbili zengeze zahluka ngokwezwi. "Ukulahlekelwa yi-Streak," isiqephu sesihlanu senkathi yesiqephu sesishiyagalombili, ngokuyisisekelo kufana nesizini "yokunwebeka okuyisikhombisa," uhlobo lokulinganiswa kwezinsongo ezahlukahlukene zabasolwa kanye nabasolwa, ngezwi elikhanyayo kunezinye iziqephu , yize inengxenye yayo yokuxaka okukhulu. Eqinisweni, inezici ezimbili ezihlekisayo ezihlekisayo emuva-emuva-emuva. Eyokuqala iphathi endlini kaWallace enomkakhe nengane, futhi, njengoba kusho uVeronica, “abangane babo abangama-yuppie.” (Lapho etshelwa ukuthi uVeronica ungumphenyi ozimele, isivakashi sihlobanisa nomsebenzi waso kuma-movie “amadala kaCharlie Chan.” ) Lokho kulandelana kulandelwa ukuhlangana okuhambisana neVeronica neNicole ekuphakamiseni indawo ethile esegumbini lokugezela likaFennell. Ngibuze uWinant ukuthi uzizwa ekhululekile yini ngezikhathi ezilula njengaleyo kanye nezikhathi ezilandela ngokwengeziwe. “Mina do uzizwe ukhululekile ngalezi zinhlangothi zombili zomdlalo obabazekayo futhi ubasondeze bonke ngamandla alinganayo, ”ungitshele. "Ekugcineni inhloso yami ukuthola iqiniso elethembekile kuwo wonke umzuzu ngaphandle kokuzwa."
Ekhuluma ngesiqephu sesibili sikaWinant, isithombe esivele ngenhla esithi "Iminyaka, Amazwe Amazwe, Ukuchitheka kwegazi," isisiqephu esimnyama kakhulu sonyaka. Isibonelo, isiqephu sokuvula isiqephu siwukubulala okwenzeka ukuthi kushunqise bobabili udlame lwalo kodwa nokho kubehlekisa njengohlobo lobulungiswa bezinkondlo. Ngatshela uWinant ukuthi lesi sigameko singikhumbuza ngesimo esifanayo esiqeshini esivela kwisizini yokuqala ye Fargo waqondisa wabiza "Ubani Ohlikihla I-Barber?", nayo eyayinokubulala okwangethusayo futhi okuhlekisayo, futhi waqhathanisa zombili lezi zigcawu nohlobo lwababukeli bamahlaya amnyama abazihlanganisa neCoen Brothers noQuentin Tarantino. “Okokuqala, ngithokozisiwe ukuhlangana noMfoweth 'uCoen noTarantino,” uphendule wathi, "yebo, ngizwa sengathi nginokufisa ngalezi zinhlobo zalolu hlobo. Ngiyakuthanda ukubhekana nezinto ezibonakalayo ezinzima nezinengqondo. Kungivumela ukuthi ngisebenzise amasu we-cinematic ukuhambisa imizwa nemizwelo. The Veronica Mars ukulandelana, ngaphandle kokuqukethwe kwayo okwesabekayo, kwangifundela njengeFrance yaseFrance. Izinhlamvu eziningi ezinezisusa ezihlukile zonke zihlangana ngasikhathi sinye endaweni efanayo. Kuyinselelo yethoni ngoba ufuna udlame luvezwe ngokweqiniso, kepha ngasikhathi sinye, kufanele lungene embukisweni uwonke. Lezi zinketho zokwenziwa zibalulekile futhi kufanele zisingathwe ngendlela efanelekile, ngaphandle kwalokho isibukeli sizokhuthazwa isipiliyoni. ”
Ubumnyama bunjengokulandelana kokuvula, isenzo sesithathu sesiqephu sinzima kakhulu. Ngabuza uWinant ukuthi zinzima kangakanani lezo zimo zokugcina. “Ngikuzwisisile ukubaluleka kwalokhu kulandelana nokuthi kungaba nzima kangakanani ngabalandeli abathile,” kuphendula yena. “Ngenze konke okusemandleni ukuyinikeza isisindo ebesifanele ngaphandle kokucolisa lokho engangikwazi ukuthi kungaba ngumzuzu odabukisayo ngokomzwelo. Ngiphinde ngancika ekusebenzeni kukaKristen kanye nokubhala okuqinile ukusithwala ngale ndaba ebabazekayo. ”
Sekukonke, uWinant wakuthola kusebenza Veronica Mars ube yinto eyanelisa kakhulu. “Uma Veronica Mars ngibuyela kwisizini yesihlanu, ”kusho yena,“ bengizosebenzisa uhlelo lwami bese ngenza yonke imizamo ebisethubeni lomuntu ukuba yingxenye yayo. Imibukiso enjengale iyivelakancane futhi ngibheka ukuba yingxenye yayo njengelungelo nodumo. ”
OKWE I-FOR-A, izinhlelo ezihlukile, I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor HULU URob Thomas Ama-spears nama-Arrows Ubuchwepheshe be-TV Izinhlelo ezihlukahlukene Veronica Mars Warner Brothers	2019-08-16
Ngaphambilini: Igumbi Lokuklama Imfashini Ngaphakathi
Olandelayo: Umklamo Wezithombe / Ukukhiqizwa Kwedijithali